Wararkii ugu dambeeyey dhismaha dekedda Hobyo | Warkii.com
Home warkii Wararkii ugu dambeeyey dhismaha dekedda Hobyo
Wararkii ugu dambeeyey dhismaha dekedda Hobyo
Dowlad goboleedka Galmudug ayaa dar-dar gelin balaadhan ka bilowday magaalo xeebeedka Hobyo oo muddooyinkii dambe ay si weyn uga socdeen dadaalo lagu doonayo in lagu dhiso dekada Hobyo, iyaga oo kaashanaya Ganacsatada maamulkaasi iyo bulshada qeybaheeda kala duwan.
Saabir Nuur Shuuriye, Wasiirka dekadaha iyo kalluumeysiga Galmudug oo hormuud u ah dadaalada lagu rabo dhismaha dekedda Hobyo oo soo martay heerar kala duwan, iyada oo uu ku guuleystay in dhismaha dekedaasi uu bilowdo wajigiisa koowaad.
Dhismaha dekedda ee wajiga 1-aad oo laga dhisayo qeyb kamid ah dekadda oo macmal ah ayaa waxa uu socon doona muddo ku siman lix bil, iyada oo si kumeel gaar ah loogu adeegsan karo baahiyaha ku xeeran deegaankaasi.
Waxa dekedda macmalka ah ee la bilaabayo kusoo xiran kara doomaha dherarkooda lagu sheegay ilaa 20-mitir, iyada oo sare u qaadi doonta kalluumaysiga oo baahi weyn xiligaan loo qabo.
Tan iyo markii uu xafiiska yimid Wasiir Saabir, waxa sare u kacday fursadaha maalgelin ee dekeda Hobyo, maadama uu dadaal badan geliyey sidii bulshada Galmudug iyo Ganacsatudu ay u maalgashan lahaayeen Dekadda Hobyo, taasi oo keentay inay dhismaheeda ku tartamaan shirkado badan.
Sidoo kale horaantii bishan unbay aheyd markii uu heshiis taariikhiya oo lagu dhisayo dekedda Hobyo la saxiixday Shirkadda Oriental oo ah Isbahaysi ka kooban Seddex Shirkad oo Turkey, Ingiiriis iyo Soomaali ah, isla markaana uu fadhigeedu yahay magaalada London ee dalka Ingiriiska.
Waxa kale oo dhawaan lagu wadaa inay deegaanada Galmudug gaaran Injineero ka socda shirkada Oriental, kuwaasi oo hordhac u noqonaya dhismaha dekedda weyne ee Hobyo, sida lagu sheegay heshiiska labada dhinac ee uu 3-dii bishan saxiixay wasiir Saabir.
Previous articleWaa kuma madaxweynaha cusub ee la doortay ee maamulka HirShabeelle?
Next articleMudulood oo kulan deg deg ah yeelanaya maanta
Ciidanka Dowladda & Al-Shabaab oo ku dagaalamay Galgaduud